TRICHOMONIASIS EE LO'DA (CAANAHA): CALAAMADAHA IYO DAAWEYNTA, KA HORTAGGA - XOOLAHA
Sida loo daaweeyo trichomoniasis ee lo'da
Inkastoo dhakhtar xoolaha loo yeero si uu u sameeyo baaritaan iyo inuu qoro daaweynta saxda ah, milkiilaha xoolaha waa inuu awoodaa inuu ogaado calaamadaha ugu horreeya ee jirrada. Mid ka mid ah cuduradaan waa trichomoniasis - dhibaato aad u daran oo u baahan daaweyn habboon. Maqaalkani wuxuu diiradda saarayaa baaritaanka iyo daaweynta cudurkan.
Waa maxay trichomoniasis
Trichomoniasis ee lo'du waa cudur halis ah oo saameynaya lo'da, qashinka, iyo dharka, taas oo ka dhalatay xayawaanka dumarka ah ee ku jira ilmo aan qaan-gaar aheyn, marxaladaha hore, xinjirowga, metritis, ragga waxay ku dhacaan balanoposthitis iyo xitaa tabar la'aan.
Cudurada cudurkani wuxuu u ekaan karaa in lo'da ku jira siilka, makaanka afkiisa, iyo sidoo kale dheecaanka amniotic, oo ku jira boorsada xuubka xuubka guska, iyo sidoo kale qanjirada galmada.
Ma taqaanaa? Wakiilka keena trichomoniasis waxaa markii hore lagu ogaaday qarnigii XIX. Dhulka dalkeenna, waxaa la ogaaday markii ugu horeysay ee qarnigii 20aad ee hurdada. Maanta, cudurkan wuxuu ku badan yahay Galbeedka Yurub, Afrika, Aasiya, Australia, iyo Waqooyiga iyo Koonfurta Ameerika.
Pathogen, ilaha iyo waddooyinka cudurka
Wakiilka keena waa unugelik noolaha Trikomonas fetus. Bakteeriyadu waxay noqon kartaa noocyo kala duwan, dherer ahaan waxay noqon kartaa 8 illaa 30 mikrons. Waxaa jira saddex flagel dheer oo horay, mid kale ayaa loo jeedaa dib. Soo-dhalashada degdega ah ayaa sabab u ah kala qaybsanaanta qaybta unugyada. Noocyada unicellular ee uurjiifka Trichomonas Ilaha ugu muhiimsan ee cudurka waa xayawaanka jiran, oo, inta lagu jiro isku dhafka ama bacriminta dabiiciga ah, u gudbiyaan bakteeriyada kuwa caafimaadka qaba.
Waxa kale oo jira habab kale:
aaladaha aan-nadiifka ahayn ee qalabka istiraatiijiga ah;
alaabta daryeelka, sida sariirta;
cayayaanka cudurka iyo cayayaanka.
Ma taqaanaa? Inkastoo xaqiiqda ah in lo'du ay dareemaan dareen aan fiicneyn oo ur ah, had iyo jeer si taxadar leh ayay u qulqulaan dhulka ka hor inta aan cawska cunin cawska. Haddii ay dhowaan aheyd bacriminta, xayawaanku wuxuu diidi doonaa inuu daaqo.
Khatarta ugu weyn waa badbaadada ugu weyn ee dulmiga ah ee heerkulku hooseeyo - waxay ku noolaan kartaa dibadda jirka xayawaanka ilaa 2 toddobaad.
Tilmaamaha ugu horreeya ee cudurka ayaa horeyba u muuqda dhowr saacadood ka dib infekshanka, maadaama Tropomonas uurjiifku uusan laheyn mudo xaddidan.
Astaamaha tilmaamaya cudurka waa sida soo socota:
heerkulka kor u kaca ilaa 41 ° S;
dhaqdhaqaaqa joogtada ah ee xubinta taranka;
dib u fiirin;
soosaarka caanaha oo hooseeya;
guduudashada furitaanka siilka;
xanaaqa ayaa lagu go'aamiyaa xanuunka;
firiiric ayaa ka muuqda xuubka siilka;
dheecaan ah, dheecaan u eg oo kuuskuusta;
dumarka uurka leh, ilmaha caloosha ayaa la diidaa.
Dumarka, sawirka kiliinikada ayaa waxoogaa daciif ah, si kastaba ha ahaatee, calaamadaha soo socda ayaa ka muuqda:
bararka sare u qaadista;
xanuunka markaad kaadidid;
raaxo la'aanta adkaanshaha guska.
Kadib markii ay baqshiintu u wareegto qaybaha salka ah, calaamadaha ayaa baaba'aya, wakhtigaas oo uu dibiga u jiraa noqdaan cudur sidaha cudurka ah. In lo'da, calaamadaha kiliinikadu waxay muuqdaan hal bil, ka dibna bararka ayaa noqda mid daba-dheeraado.
Waa muhiim! Xayawaanada laga helay trichomoniasis muddo dheer ka dib soo-kabashada ayaa nadiif ah.
Vestibule ee hoosta haweenka waxaa lagu daboolay walxaha qarxa - qaabka dabeecadda ee trichomoniasis. Waqtigaan, bararro ka mid ah oviducts iyo ugxan-yari ayaa dhacaya, iyo sidoo kale cysticity.
Cudurkaan waxaa lagu ogaadaa isticmaalka xogta caafimaadka xoolaha, calaamadaha caafimaadka, iyo baaritaanka mikroscopic ee waxyaabaha laga helo xayawaanka shaki laga galo. Cilmi-baaris sax ah ayaa la sameeyaa ka dib marka la doorto cudurka pathogen-ka. Waxaa lagula talinayaa in aad qaadatid xabo falanqee inta lagu jiro kuleylka ama maalmaha ugu horeeya. Cilmi-baarista waa in isla markiiba lagu sameeyaa maqaarka, si aanad u deynin wax walbo oo isla markaasna hoos u dhigta dhaq-dhaqaaqa dulinka. Baaritaanka waxaa la sameeyaa saddex jeer oo isku xigta muddo 10 maalmood ah.
Trichomoniasis waxay keenaysaa isbeddellada pathological ee soo socda:
Qadar badan oo dheecaan leh ayaa laga helaa ilmo-galeenka.
Xuubka xuubka ayaa ku barara oo qallafsan, oo leh finan yaryar.
Miro ayaa ah mid xajmi ah.
Ukumaha waxaa ku jira feeraha yaryar iyo kuwa waaweyn.
Gawaarida waxay ku dhuunteen guska iyo faleebada.
Hababka xakamaynta iyo daaweynta: daawooyinka loo sameeyo ilmo-galeenka, isugeynta ilmo-galeenka, antibiotics
Daaweynta Trichomoniasis waa in ay ahaato mid dhamaystiran. Xayawaanka xanuunka badanaa ayaa loo qoraa isticmaalka maalgalinta taasoo keenaysa in la yareeyo ilmo-galeenka iyo ka saarida walxaha gubtay.
Waxay noqon doontaa mid waxtar kuu leh inaad wax dheeraad ah ka ogaato antibiyootigga ee lo'da.
Daawooyinkaan waxaa ka mid ah:
Wixii waraabinta ilmagaleenka ee loo yaqaan "
10% xal of ichthyol on glycerin;
amamargen oo biyo lagu qasi jiray cabirka 1: 20000;
iodine on saline.
Waa muhiim! Baaritaan soo noqnoqda ee lo'da waxaa la sameeyaa 10 maalmood ka dib marka la dhammeeyo daaweynta. Bulls waxaa la hubiyaa 2 bilood kadib. Haddii natiijooyinku noqdaan kuwo wanaagsan, ku celceli daaweynta.
Kabaha bukaanka waxay ku qaataan daaweynta soo socda:
galaan daroogooyinka neerotropic;
geedi socodka qulqulka qulqulka qandhada;
Xalka hydrogen peroxide ayaa la isticmaalayaa;
gudahiisa ayaa lagu daaweeyay 1% xal of Trichopol ee qiyaasta 100 ml;
subcutaneously injected leh isku dar ah ee glycerin iyo biyaha ee xaddiga 1: 3.
Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee looga hortago trichomoniasis waa:
Cunnooyinka lo'da ee leh shahwada qashinka caafimaadka leh.
In dhirta dabiiciga ah, ilaalinta adag ee heerarka caafimaadka xoolaha iyo nadaafadda.
Haddii shaqsiyaadka cusubi ay ka muuqdaan beerta, waxaa lagu hayaa karantiin waxaana lagu baarayaa trichomoniasis.
Inta lagu jiro daaqsinka, ka reeb taabashada xayawaanka aan cidiyaha ahayn.
Meelaha uu qofku jirran yahay si fiican ayaa loo nadiifiyaa.
Waxaan kugula talineynaa inaad ogaato 10 waxyaalood oo ugu sarreeya oo ku saabsan lo'da.
Sida aad arki karto, trichomoniasis waa cudur halis ah oo u baahan ficil degdeg ah. Muhiim ma aha oo kaliya inaad u hoggaansanto tallaabooyinka ka hortagga ah, laakiin inaadan dib u dhigin daaweynta xitaa haddii aad shaki ku jirto, ka dibna xayawaankaagu waxay noqon doonaan kuwo caafimaad qaba wakhti dheer.